Tsvaga mabhenefiti emafuta babassu kune runako rwako | Bezzia
Mushure me rosehip mafuta kana argan oiri, isu takafunga kuti pakanga pasisina mamwe maoiri ekutsvaga, kuti isu taitoaziva ese Asi iyo Natural cosmetic indasitiri haimire kutishamisa, ino nguva ine babassu mafuta, mafuta matsva anovimbisa kuve shanduko yekunaka kwedu. Iyi oiri ine zvinhu zvikuru zvinogona kuita kuti ive yedu yevanoda.
Tinoda kutaura newe nezve zvese zvakasikwa zvinhu zvaunogona kushandisa paganda rako uye isu tataura pazviitiko zvakawanda pamusoro pemafuta akasiyana echisikigo, kunyangwe ichi chiri chimwe chitsva icho vanhu vazhinji vanotoziva. Ngatione kubva mafuta ebabassu anobva kupi uye ndezvipi zvivakwa uye mabhenefiti anoita kuti ive yakakosha.
1 Mafuta ebabassu anobva kupi?
2 Natural silicone mhedzisiro
3 Babassu mafuta echiso
4 Babassu mafuta ekuisa mvura paganda
Mafuta ebabassu anobva kupi?
Oiri iyi inozivikanwawo seMacau kokonati mafuta. Iyo inouya kubva kuOrbignya Olifera Mbeu Yemafuta. Ndizvo chanza chinowanikwa kuAmazon uye chinozivikanwa se babassu. Mbeu dzayo dzinoshandiswa kugadzira mafuta matete, ane mwenje uye zvishoma yero toni. Iine lauric acid, oleic acid, palmitic acid uye myristic acid. Maumbirwo aro ari padyo kwazvo nemafuta ekokonati atinoziva kwazvo, asi mabhureki akawedzera uye mazhinji anosarudza kuishandisa kune ayo zvivakwa.
Natural silicone mhedzisiro
Chimwe chezvinhu chakonzera iyi oiri yemabassu kuti ishandiswe mumafuta mazhinji nemashamposi ndizvo chaizvo zvazvinoita. Iyo inovhenekera uye inovaka semafuta ekokonati uye seyakasikwa asi zvakasiyana neiyi yakareruka. Kana iwe wakamboshandisa coconut mafuta iwe unozoziva kuti mushure maizvozvo unofanirwa geza bvudzi rako zvakanaka kuitira kuti parege kuva nekuremerwa, chimwe chinhu chinoitika nemafuta mazhinji. Mumashampoos, pamusoro pezvose, hunhu hunodiwa hunosiya bvudzi rakasviba asi rakasununguka. Ndokureva, kuti inonwisa mvura asi isina kuidzikisira, chimwe chinhu chinganyatso kuita iyi oiri yechisikigo nekuti ine chimiro chakareruka icho vamwe vanoshaya. Ndokusaka irikushandiswa zvakanyanya mukuzora kudzivisa silicones iyo inozokuvadza bvudzi redu.
Babassu mafuta echiso
Kana iwe uine T-zone kana kumeso kune mafuta, hazvingamboitike kwauri kuti ushandise mafuta pairi nekuti akaomesesa uye pakupedzisira anovhara pores kana kuti zvinokonzeresa kuputika kweziso. Zvisinei iyo babassu mafuta akareruka zvakanyanya, nekudaro vanoishandisa mumafuta mazhinji. Nyore zvinonwisa mvura nekuenda mukati-kati memakanda eganda usinga vhara iyo pores uye nekudaro yakanakira kurwisa kusagadzikana uye kuchembera nenzira yechisikigo. Aya mafuta anokwanisa kushandiswa kumeso uye acharamba achichenesa kwemaawa pasina kuremerwa.
Babassu mafuta ekuisa mvura paganda
Aya mafuta ebabassu haangogone kushandiswa chete pane vhudzi kana kumeso, asiwo paganda remuviri. Io oiri inodiridza asi panguva imwe chete ine mavitamini uye antioxidants, iyo inotibvumidza kuchengetedza ganda zvakanyanya kusimba. Ruvara rwayo rwakareruka zvinoreva kuti hatina iko kunamira kunonzwa paganda uye tinogona kupfeka gare gare, chimwe chinhu chinoitika nemamwe mafuta mazhinji atinogona kushandisa chete husiku. Oiri iyi, sezvo iri yakareruka, yakanyatso nyudzwa, inodiridza ganda rakaoma uye inobatsira kunyorova ganda rine mafuta pasina kuburitsa sebum yakawanda. Kutenda kune zvese izvi zvivakwa, chazove chikafu chemakambani mazhinji ekuzora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Babassu mafuta anobatsira